Ra’isul wasaaraha itoobiya oo Arin lama filaan ah ka sameeyay Qaahira masar. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 11 June 2018
Qaahira ( mareeg news ) Ra’isul wasaaraha itoobiya abiy ahmed oo booqasho rasmi ah ku tagay dalka masar ayaa ku dhaqaaqay arin ay daad ula dhaceen dadka masaarida warbaahinta dalkaasna ay aad u hadal heeyso.
Abiy ahmed iyo Madaxweynaha masar mr siisii inteey ku jiree shirka jaraaid ee wada jirka ah ayuu RW Abiy ugu dhaartay dadka masaarida (in ayna itoobiya dooneyni wax dhibaata ku ah dalkq masar) dhaarta waxaa u meerinayay Madxweyne abdifataah al siisii.
Waxuu kaloo sheegay mr Abiy in ujeedka biya xereenka niinlka uu yahay mid borumar iyo dan uwada ah labada dal Ee masar iyo Itoobiya.
xiriika labada dal ee masar iyo itoibiya ayaa mudooyinkii dambe ahaa mid aad u xun madaama itoobiya ay biya xereen ka dhiseeysay WABIG-NIIL oo ay dadka masaarida noloshooda ku xerantahy, labadan hogaamiya ayaa isku dayay sidii ay u sameey lahaayeen xiriir xidida adag ee u dhaxeeya masar iyo itoobiya.